I-Fibromyalgia kunye nokukhulelwa [Isichaphazela njani isisu ngoFibromyalgia]
02 / 04 / 2019 /0 Amazwana/i udinwe/av ubuhlungu
Ngaba unayo i-fibromyalgia kwaye ukhulelwe- okanye ucinga ngokuba yiyo? Ke kubalulekile ukuba wazi ukuba i-fibromyalgia inokukuchaphazela njani njengomfazi okhulelweyo ngexesha lokukhulelwa. Apha, siza kuphendula uluhlu olubanzi lwemibuzo malunga nokukhulelwa nge-fibromyalgia.
Ngamanye amaxesha iimpawu eziqhelekileyo ze-fibromyalgia-ezinjengeentlungu, ukudinwa kunye noxinzelelo-kunokuba ngenxa yokukhulelwa uqobo. Kwaye ngenxa yoku, banokuqhubela phambili. Kukwimeko yokuba uxinzelelo olwandayo lokuba nomntwana lungabangela I-fibromyalgia flare ups -izokukwenza uzive umbi kakhulu. Ukulandela rhoqo ugqirha kubalulekile.
Silwela abo bane-fibromyalgia, isifo esinganyangekiyo sobuhlungu kunye nezigulo ukuze sibe namathuba angcono onyango kunye nophando.
Into ayivunyelwanga ngumntu wonke, ngelishwa- kwaye umsebenzi wethu uhlala uchaswa ngabo bafuna ukwenza ubomi bemihla ngemihla bube nzima ngakumbi kwabo baneentlungu ezingapheliyo. Yabelana ngenqaku, njengathi kwiphepha lethu le-FB og ijelo lethu le-YouTube Kwimithombo yeendaba zentlalo ukusijoyina kumlo wokuphila ubomi bemihla ngemihla kwabo baneentlungu ezingapheliyo.
Eli nqaku lihlolisisa kwaye liphendula le mibuzo ilandelayo malunga ne-fibromyalgia kunye nokukhulelwa:
I-fibromyalgia ikuchaphazela njani ukukhulelwa?
Ngaba uxinzelelo oluphathelene nokukhulelwa luyayinyusa imida?
Ndingawuthatha amayeza e-fibromyalgia xa ndikhulelwe?
Zeziphi iindlela zonyango ezinconyelwa abasetyhini abakhulelweyo abane-fibromyalgia?
Kutheni le nto ukwenza umthambo nokuhamba kubaluleke kakhulu xa ukhulelwe?
Yintoni abanokuyenza ngeFibromyalgia xa bekhulelwe?
1. I-Fibromyalgia ichaphazela njani ukukhulelwa?
Ukukhulelwa kukhokelela ekonyukeni okukhulu kwenani lamahomoni emzimbeni.
Ukongeza ekuzuzeni ubunzima bomzimba, umzimba ukungalingani kwaye kufunyanwa imilo entsha yomzimba. Iinyanga ezintathu zokuqala zokukhulelwa nazo zihlala zibangela nausea kunye nokudinwa. Njengoko ubona, abantu abaninzi abane-fibromyalgia baya kufumana ukwanda kweempawu zabo kulo lonke ixesha lokukhulelwa ngenxa yokungalingani kwehomoni.
Uphando luye lwabonisa ukuba abafazi abane-fibromyalgia banokuba neentlungu kunye neempawu xa bekhulelwe xa kuthelekiswa nalabo bangenaso esi sifo. Akumangalisi ngokukodwa, mhlawumbi, njengoko umzimba uhamba notshintsho oluthile.Ngelishwa, uphononongo lubonise ukuba abantu abaninzi banamava eempawu ze-fibromyalgia eziba mandundu ngexesha lokukhulelwa. Kwakhona, umntu ubona ngakumbi ukwanda kwentlungu eyandayo, ukukhathala kunye noxinzelelo lweemvakalelo kwiinyanga ezintathu zokuqala zokukhulelwa.
Apha sifuna ukuphosa amanzi emlilweni ngokuthi abantu abaninzi baphinde baxele ukuphuculwa kweempawu ngexesha lokukhulelwa, ke akukho sigqibo se-100% apha.
Sithanda ukugxininisa ukuba i-yoga yokukhulelwa, ukuzolula kunye nokuzivocavoca kunokuba yindlela elungileyo yokunciphisa uxinzelelo lwengqondo nangokomzimba kulo lonke ixesha lokukhulelwa. Kwinqaku elingezantsi ungabona inkqubo yoqeqesho ekubonisa ukuziqhelanisa nokuzola okuhlanu.
2. Ngaba ukukhulelwa okunxulumene nokukhulelwa u-Aggravate Fibromyalgia?
Thina nge-fibromyalgia siyazi ukuba uxinzelelo olunzima lunokuchaphazela njani isifo esinganyangekiyo kwaye ukukhulelwa kubangela uxinzelelo olukhulu ngokweemvakalelo nangokomzimba.
Kufuneka sikhumbule ukuba ukuzalwa ngokwayo lixesha loxinzelelo olukhulu kunina. Ngalo lonke ixesha lokukhulelwa, uneenguqulelo ezinkulu kumanqanaba ehomoni emzimbeni- kubandakanya i-estrogen kunye neprogesterone.
Apha kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ixesha emva kokuzalwa linokuba nzima kakhulu - nkqu nakwabo bangenayo i-fibromyalgia-ke kubalulekile ukuba uqaphele ukuba eli xesha linokukhokelela ekwandeni kweentlungu kunye neempawu.
Funda: I-Fibromyalgia kunye neNhlungu ebuhlungu Ekuseni: Ngaba uyagula ukulala kakubi?
Apha unokufunda ngakumbi malunga neempawu ezintlanu zeempawu zakusasa kwezi ezinefibromyalgia.
3. Ndingaluthatha amayeza e-Fibromyalgia xa ndikhulelwe?
Hayi, ngelishwa, akukho ziinkozo zisetyenziselwa i-fibromyalgia enokusetyenziswa kwakhona xa ukhulelwe. Ngokukodwa ibuprofen inokuba yingozi kubafazi abakhulelweyo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokusetyenziswa kokubulawa kweentlungu xa ukhulelwe kuya kufuneka ubonane nonyango lwakho.
I-Fibromyalgia inokubangela iintlungu ezinzima-ngakumbi nge ukuvuleka-ups.
Ngesi sizathu ke, icebiso lokuphepha ukubulala iintsholongwane xa ukhulelwe kunzima ukuginya abo bane-fibromyalgia. Uphando lubonakalisile ukuba ukusetyenziswa kweli qela lezigulana liphezulu kangangezihlandlo ezine kunabanye abaguli.
Sincoma inkonzo yoluntu Safe Mamma Medicine (ikhonkco livula kwifestile entsha) kushushu kakhulu. Apha unokufumana iingcebiso zasimahla kwiingcali malunga nokusebenzisa amayeza ngexesha lokukhulelwa.
Abantu abaninzi baxela ukuba mandundu kwentlungu yemisipha entanyeni nasemagxeni ngexesha lokukhulelwa- kunye nexesha lokuncancisa. Kudla ngokubizwa njalo stress entanyeni. Unokufunda ngakumbi malunga nokuxilongwa kwinqaku leendwendwe ukusuka kwiziko laseRåholt Chiropractor kunye nePsychotherapy kwinqaku elingezantsi.
4. Luluphi unyango olucetyiswayo kwabasetyhini abakhulelweyo abane-Fibromyalgia?
Ukwazi umzimba kunye nokuba umntu uphendula athini kubalulekile.
Kungenxa yokuba siphendula ngendlela eyahlukileyo kunyango lomntu ukusuka komnye umntu ukuya komnye - Kodwa unyango olusoloko lulungile kubafazi abakhulelweyo abane-fibromyalgia lubandakanya:
Unyango ngokwasemzimbeni kunye nokudibana
Sincoma kakhulu ukuba unyango lomzimba lwenziwe kuphela kobunye bobuchwephesha obunemvume yoluntu esidlangalaleni obunobuchule obukhethekileyo kwimisipha kunye nokudibana - i-physiotherapist, i-chiropractor okanye i-therapist. Esi sincomo sibangelwa kukuba le misebenzi mithathu iyaxhaswa kwaye ilawulwa liCandelo lezeMpilo.
Ukutya okulungisiweyo okujongana neemfuno zamandla abo bane-fibromyalgia nako kunokuba yinxalenye ebalulekileyo yokuziva ungcono. Ukutya 'kwe-fibromyalgia' kulandela iingcebiso zesizwe zokutya kunye nezikhokelo. Unokufunda ngakumbi ngayo kwinqaku elingezantsi.
5. Kutheni le nto ukwenza umthambo kunye nokuhamba kubaluleke kangaka xa ukhulelwe?
Ukukhulelwa kubangela utshintsho olukhulu emzimbeni-kubandakanya iplavis yangaphambi kokufuduka.
Njengoko isisu sisiba sikhulu, oku kukhokelela ekunyukeni koxinzelelo kumqolo ongezantsi nakumalungu e-pelvic. Ukutshintsha kwesithuba se-pelvic kuya kubangela uxinzelelo ngakumbi nangakumbi kumalungu e-pelvic njengoko usondela kumhla obekiweyo- kwaye unokubonelela ngesiseko sokutshixwa kwe-pelvic kunye neentlungu zangasemva. Ukuba unciphise ukushukumiseka kumalungu adibeneyo kwi-pelvis, oku kunokukhokelela kuxinzelelo olukhulu ngasemva. Ukuzilolonga rhoqo kunye nokunyakaza kunokukunceda ukuthintele oku kwaye ugcine izihlunu zakho zihamba kakuhle kangangoko.
Ukuzilolonga rhoqo kunye nonyango lomzimba, phakathi kwezinye izinto, kunokubangela ezi zibonelelo zezempilo:
Ukuhamba okuphuculweyo ngasemva, kwimvubu nakwi-pelvis
Imisipha eqinile kunye neMisipha yePelvic
Ukonyusa ukuhamba kwegazi ukuya kwimisipha eqinileyo kunye nezilonda
Ukuphuculwa kokusebenza komzimba kukhokelela ekushukumeni okungakumbi kumajoyini, ukungabi namandla kwemisipha kunye nokwanda kwamanqanaba e-serotonin emzimbeni. Le yokugqibela yi-neurotransmitter enxulunyaniswa ikakhulu ne-fibromyalgia- ngenxa yokuba eli qela lesigulana linamanqanaba asezantsi kunesiqhelo. USerotonin, phakathi kwezinye izinto, unceda ukulawula imo yeemvakalelo. Amanqanaba asezantsi emichiza oku emzimbeni anokuba sisizathu soxinzelelo kunye noxinzelelo phakathi kwabo bane-fibromyalgia.
Ngaba uyazi ukuba i-fibromyalgia ichazwa njengokuchonga isifo sokopha? Njengokunye ukuphazamiseka rheumatic, ukudumba kuhlala kudlala indima kubuhlungu bentlungu. Ngesi sizathu ke, kubalulekile ukuba wazi malunga namanyathelo endalo okulwa nokosuleleka ngokuchasene ne-fibromyalgia njengoko kuboniswe kwinqaku elingezantsi.
6. Yeyiphi imithambo elungele abafazi abakhulelweyo abane-Fibromyalgia?
Ukuzivocavoca kwabasetyhini abakhulelweyo kufuneka kulungelelaniswe kwaye kuthathele ingqalelo ukuba kude kangakanani ekukhulelweni.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuzilolonga ezifanelekileyo kubafazi abakhulelweyo abane-fibromyalgia- ezinye zezona zibalaseleyo zibandakanya:
Ukuzivocavoca ngokugxila kwintshukumo yokuhamba kunye neempahla
Yoga yabasetyhini abakhulelweyo
I-VIDEO: Imijikelo emi-6 eQinisekisiweyo yoKukhulisa abo baneFibromyalgia
Nazi iindlela ezintandathu zokuthamba ezomeleleyo ezilungiselelwe wena one-fibromyalgia- kwaye ukhulelwe. Cofa kwividiyo engezantsi ukuze ubone imithambo. QAPHELA: Ubuhlungu basemva kwiibhola zonyango ngokuqinisekileyo kuya kuba nzima ukufezekisa kamva ukukhulelwa.
Sukuzilolonga kwiPhuli yaManzi ashushu xa ukhulelwe
Ukuzivocavoca echibini lamanzi ashushu luhlobo lokuzilolonga oluthandwayo ngabaninzi abane-fibromyalgia- kodwa apha kubalulekile ukuba wazi ukuba umthambo emanzini ashushu okanye ityhubhu eshushu akulunganga ukuba ukhulelwe. Uphando lubonakalisile ukuba inokwenyusa amathuba okuba uphuthaphu (1) ukungaxutyaniswa kwesibeleko. Oku kusebenza kumanzi afudumele ngaphezu kwama-28 degrees.
Ngaba uyazi ngenye indlela ukuba zisixhenxe iindlela ezahlukeneyo zentlungu ye-fibromyalgia? Kungenxa yesi sizathu le nto iintlungu zakho zihlala zitshintsha kuzo zombini amandla kunye nomboniso. Funda ngakumbi malunga nayo ngekhonkco kule nqaku ingezantsi, kwaye uya kukhawuleza ube sisilumko kancinci malunga nokuba kutheni uziva ngale ndlela uziva ngayo.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/FIBROMYALGI-OG-SVANGERSKAP.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2019-04-02 19:17:022021-03-24 10:57:47I-Fibromyalgia kunye nokukhulelwa
Iimpawu ezi-9 zokuqala zeSifo seNyango esiNganyangekiyo Yintoni ofanele uyazi ngePolymyalgia Rheumatism